Wiricheya Anowanikwa Matekisi eLos Angeles Area
Heano zvimwe zviwanikwa kana iwe uchitsvaga kufambidzana kutakura. Iwe ungangoda kutarisa mukufonera tekisi iyo yakanyatsogadzirirwa kugara wiricheya vanoshandisa.
FULL VHIRIKI-kufambidzana SERVICES
www.unitedtekisi.com / zvemukati /VHIRIKI-kufambidzana
Iyo muzana ye VHIRIKI-kufambidzana mota mumakungwa edu dzakapfuura 2%… kubva paPoint A kusvika paBoot B. United Taxi varidzi-vatyairi vanotora chikamu chechitatu…
Fleet - Los Angeles - Los Angeles Taxi Cab Service
ndinodatekisi.com / fleet /
Kuziva cheki yeChecker, ingo tsvaga macab anotakura edu… Tine zvakare makumi maviri nemana VHIRIKI-kufambidzana vans kune avo vanoda masevhisi akasarudzika.
Wiricheya Anowanikwa Matekisi eLos Angeles Area…
United Independent Taxi inoshandira iyo yakakura Los Angeles nzvimbo, zvinoreva LA, Hollywood, Santa Monica, Venice, Marina Del Ray uye nezvimwe. Paunenge uchigadzira ...
SF Wiricheya Inowanikwa Matekisi | Wiricheya… - San…
Heano zvishoma VHIRIKI kufambidzana matekisi muSan Francisco, California. Vamwe vavo vachatofamba zvishoma kunze kweSF. Unogona zvakare kuona mifananidzo yavo…
Mufananidzo Mienzaniso ye VHIRIKI kufambidzana nemuchovha
Mimwe mifananidzo ye wheelchair taxi
Wiricheya Inowanikwa Taxicab State Zvinyorwa
Taxi Cab Makambani: Iwe unopa here VHIRIKI kufambidzana Tekisi? Dzvanya Pano kune yako yemahara zvinyorwa uye zviwanikwa zverudzi rwese VHIRIKI kufambidzana Van…
Inotumirwa Dispatch: Wiricheya-Inowanikwa Taxi Service mu…
kufambidzana Dispatch inobvumira avo vari mu kuremara munharaunda kukumbira VHIRIKI-kufambidzana tekisi sevhisi yakanangana nekero yavo yemugwagwa muManhattan.
Sezvo Uber, Lyft, Sidecar ichikura, saizvozvowo zvinonetsa zve… - San…
Kukadzi 25, 2014 - Kota ya VHIRIKI-kufambidzana cabs - ndeapi vakuru vanoona seinchpin yeparatransit system - ikozvino gara wakamira nekuti hakuna kukwana ...
Wiricheya Taxi - Ace Taxi Service
(860) 244-9999 Ace Taxi Cab inoshandira pamusoro pemaguta makumi matatu muConnecticut nevekurapa nehurema… Kana uchida VHIRIKI taxi ine hushamwari, fonera Ace Taxi CT kutanga!
Mutongi anobvumidza Push-wheelchair-anokwenenzverwa macab, 30-cent…
Sep 16, 2014 - Mutongi wedare reManhattan Federal akabvumidza chibvumirano cheguta Chipiri chekuita hafu yengarava dzayo dzeyero macab VHIRIKI-kufambidzana na 2020,…